Soo dejisan WinDirStat 1.1.2.80 – Vessoft
Soo dejisan WinDirStat
WinDirStat – software ah si ay u falanqeeyaan ka kooban disk adag. WinDirStat uu baaritaanku bannaan ee disk adag oo soo bandhigay faahfaahin ee foomka of liisaska kala duwan. Liisaska ayaa natiijada baaritaanada drive adag waxaa ka mid ah: kordhin liiska tirakoobka ee noocyada kala duwan file, tusaha khariidada la soo bandhigay waxa ku jira ay qaab garaafyada iyo liiska diiwaanka by size soocaa. WinDirStat u saamaxaaya in ay si fudud u garto nooca xogta, taas oo file waxaa iska leh adigoo calaamadaynaya noocyada file kala duwan leh midab gaar ah. Software wuxuu taageeraa nadiifinta xushay meel disk iyo dad badan oo la falalka kala duwan la faylasha ama galalka u qabata. WinDirStat ayaa interface ah dareen iyo fududahay in la isticmaalo.
Scan faahfaahsan oo ka kooban drive adag
Galitaanka meel disk tirakoobyada
Muujinayo oo ka mid ah files iyo fayl midabyo kala duwan
Ayna meel disk
WinDirStat Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... TweakBit PCSuite 9.0.0.1